Goobaha Khadka Tooska ah ee Slovenia - Xeerarka Lacagta Kaadhadhka ee Khadka Tooska ah
Laga bilaabo Janaayo 2017 goobaha khamaarka khadka tooska ah ee Slovenia badanaa waxay ka kooban yihiin bakhtiyaanasiibka qaranka Slovenia. Waxa kale oo jira bog Esteve ah oo ka hoos shaqeeya jihada bakhtiyaanasiibka isboortiga. Labada siyaasadood ee kheyraadka waxaa loogu talagalay in lagu soo jiito ciyaartooyda gudaha, laakiin marin u helka boggaga ajnabiga ee khadka tooska ah waxaa sidoo kale ku jira goobaha dadweynaha iyadoon wax xaddidaad ah la saarin. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku xusnay diiwaankayaga khamaarka ee khadka tooska ah, oo ay u badan tahay, xaaladdan si dhakhso leh ayey isu beddeli doontaa.
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbalaya ciyaartoy ka socota Slovenia, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka bilaabanta mashiinnada ciyaarta ilaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa dib u eegistayada bogagga internetka ee khadka tooska ah, si aad uga feejignaato dhiirrigelinta khadka tooska ah ee ugu wanaagsan, gunnooyinka iyo xulashooyinka lacag bixinta ee ay heli karaan ciyaartoy ka socota Slovenia.
Slovenia - waa wadan yar oo kalabar cabirkiisu yahay gobolka Moscow, laakiin ku yaal meel aad u wanaagsan. Halkan waxaad ku raaxeysan kartaa quruxda Alps, dabeecadda cajiibka ah ee kaymaha iyo xeebaha Adriatic Sea. Laakiin khamaarka dadku waxay leeyihiin wax ay ku sameeyaan geeskaan Yurub, maxaa yeelay meelo badan oo ka mid ah casinos-ka kala duwan ee Slovenia.
Slovenia - in yar oo juqraafiya ah iyo taariikh ah. Dawlad gooni ah ilaa 1991;
Shan muuqaal oo Ljubljana ah - caasimadda Slovenia, oo leh cinwaanno;
Jamhuuriyadda Slovenia waxay ku taal bartamaha Yurub. Dariska dalkan yari waa Italy, Austria, Hungary iyo Croatia. Caasimaddu waa magac gabay ah - Ljubljana.
Goobta Jamhuuriyadda runtii waa mid gaar ah. Meel yar oo aad ku mari karto barafka, kaliya ku dhex wareego meelaha dhaadheer ee alpine ee dhaadheer ee ku soo dhaadhaca wabiyada duurjoogta ah, si aad ugu baxdo safarro godad badan oo aad ku raaxaysato biyo-dhaca, u safarto xeebta Adriatic Sea, ama aad u fariisato xasilloonida kayn bikro ah oo cufan. Waxaa jira goobo fara badan oo jihooyin aad u kaladuwan, iyo horumar weyn oo dhanka khamaarka ah.
Taariikhda Slovenia waa mid dheer oo aad u qasan, dhab ahaantii gobolka waxaa la sameeyay kaliya 1991 waxaana la aqoonsaday 1992. Si kastaba ha noqotee, dadku waxay ku noolaayeen aaggan waqti dheer ka hor xilligeenna. Maanta gobolka waxaa ku nool dad ka badan 2 milyan oo qof. Qaabka dawladnimada - jamhuuriyad baarlamaani ah, madaxa qaranku waa madaxweynaha, maanta waa Borut Pahzor. Door muhiim ah oo uu ciyaaray Ra'iisul Wasaaraha, ayaa hadda haya jagadan Miroslav Tserar.
Slovenia waxay ku jirtaa EU, marka lacagta rasmiga ah waa Euro. Dhulku wuxuu u qaybsan yahay 210 beelood iyo 11 magaalo.
Khamaarista Slovenia waa la oggol yahay, oo casinos-yaashu waxay ku yaalliin magaalooyin dhowr ah: Lipica, Portorož, Nova Gorica, Kranjska Gora. Marka lagu daro dadka deegaanka ah waxay si gaar ah halkan u yimaadaan si ay ula ciyaaraan muwaadiniinta dalalka deriska ah - Austria iyo Talyaaniga. Dabcan, khamaarka - mid ka mid ah meelaha ugu caansan dalxiis.
Muuqaal ka mid ah casino Slovenia ayaa ah inaysan u badneyn inay ku ciyaaraan qaddarka badan iyo 100-200 euro. Laakiin martida ayaa had iyo jeer badan. Haddii aad rabto inaad u ciyaarto boosaska sare, waxaa lagama maarmaan ah in lala socodsiiyo shaqaalaha guriga khamaarka, markaas oo lagugu casuumayo qolka VIP-da ee gaarka loo leeyahay.
Meesha ugu horeysa waxay u socotaa Khamaarista waa Nova Gorica, oo ah naadi halkan xitaa ku diyaarso dalxiisyo. Magaaladaan waxaa ku yaal 2 ka mid ah casinos-yada ugu waaweyn Slovenia: Perla Casino & Hotel, Park Casino & Hotel. Sidee ugu jirtaa casinos-ka adduunka ugu fiican, gudaha gudaha raaxada leh, shaqaale aan caqli-gal ahayn, daraasiin noocyo kala duwan oo kaarar ah, roulette, mashiinno-naadi.
Xarun kale oo ka mid ah howlaha khamaarka waa Kranjska Hill. Waxaa sidoo kale jira casinos-2 caan ah: Korona, Casino & Hotel Kranjska Gora. Waxay bixisaa wax aan ka yareynin casino ee Nova Gorica.
Nasashada ee Portorož sidoo kale naftaada waxay kula dhaqmi kartaa ciyaar kaararka, mashiinka booska ama roulette, magaalada waxay leedahay 2 casinos: Casino Portorož, Grand Casinò Portoroz. Lipica, martidu ma tagi doonaan la'aanteed khamaarista, si fudud u booqo Grand Casinò Lipica.
Dabcan, booqdayaashu waxay ku raaxeysan karaan oo keliya ciyaarta, laakiin sidoo kale cabitaanno fara badan oo badan. Badanaa waxay ku socotaa barnaamijka bandhigga casino, markaa galbinta, oo aan rabin inay ciyaaraan, sidoo kale waxay noqon doonaan wax la sameeyo.
In Slovenia si dhab ah u booqdayaasha casino, sidaas darteed boosaska si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa. Taageerayaasha ciyaaraha kaararka ayaa ku farxi doona noocyadooda kala duwan, waxay ku xiran yihiin inay leeyihiin blackjack iyo turub, kan dambe waxaa matalaya dhowr nooc: oasis poker, Texas Hold'em, 7 Card Stud Poker, Caribbean Poker, iyo xitaa Badugi. Taageerayaasha Punto Banco sidoo kale ma ahan in laga xumaado. Hubso inaad ka shaqeyso hoolalka roulette, badanaa Faransiis.
Sida dhammaan waddamada EU, shaqada casino oo ay maamusho gobolka. Haddii hay'addu ku shaqeyso nambarka labiska iyo da'da xaddidan, waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay waxbartaan kahor intaan la dalban booqashada.
Slovenia - waa dal casri ah, markaa halkan waxaa lagu ciyaaraa kaliya ma ahan qamaar dhab ah, laakiin sidoo kale dalwaddii. Sannadkii 2014-kii, sharci cusub, oo nidaaminaya dhaqdhaqaaqa hawlwadeennada, ayaa soo saaray buro kontorool khaas ah, oo si toos ah hoos tagta Wasaaradda Maaliyadda.
Ku shaqeynta qadka tooska ah ee internetka waa lagu kalsoonaan karaa, tan iyo bilowgii shaqada waxaa looga baahan yahay inay helaan ruqsad 5 sano ah. Iyo si ay ugu gudbaan imtixaanka, waxay u kuur galaan liistada liistada ee xaaladaha qasabka ah. Sidaa darteed, amniga iyo ka bixitaanka lacagtu walwal kama qabaan. Walaaca ugu weyn ee raaxada leh ee Casino, Royal Panda Casino, All Slots Casino, Betvictor Casino, Betway Casino iyo kuwa kale oo badan.
Buundada Triple. Cinwaanka: Tromostovje, Ljubljana. Isku soo wada duuboo kulankan aadka u quruxda badan, oo ka mid ah astaamaha qaran, wuxuu ka kooban yahay 3 buundooyin lugeynaya, oo lagu tuuray wabiga Ljubljanica. Ka gudub buundada waxay ku jiri kartaa qeybtii hore ee magaalada, iyadoo loo xiray taraafikada.
Beerta Tivoli. Cinwaanka: Tivoli Park, Ljubljana. Waa jardiinada ugu weyn caasimadda, oo ku fidsan waqooyiga-galbeed ee xarunta taariikhiga ah. Bedka 500 hektar oo ku yaal si toos ah Tivoli jardiin muuqaal leh oo leh arboretum, balli iyo beero, buurta iyo buurta Rožnik Kone.
Katidralka St. Nicholas. Cinwaanka: Dolničarjeva ulica, 1, Ljubljana. Kaniisad-dhismeedka Archdiocese-ka Ljubljana, ayaa loo dhisay si loogu sharfo Nicholas of Myra. Dhismaha taallo qaran ayaa bilaabantay 1361 waxaana la dhammaystiray kaliya qarnigii XVIII.
Matxafka Qaranka ee Slovenia. Cinwaanka: Puharjeva ulica 9 1000 Ljubljana. Kani waa matxafka ugu weyn ee farshaxanka ee Slovenia, oo la aasaasay 1918. Halkan waxaa lagu soo ururiyey sawirro qurux badan oo laga soo qaaday qarniyadii dhexe.
Matxafka Qaranka ee Slovenia. Cinwaanka: Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana. Matxafkan ugu da'da weyn dalka ayaa laga soo ururiyay waxyaabo badan oo raadraaca qadiimiga ah, walxaha farshaxanka qurxinta, daabacaadda, sawirro, qadaadiic.
Isloveniyaan - waa luuqad qadiim ah oo reer Yurub ah, wali waxay haysaa lambarka labada lambar.
Qeybta dhulka - kayn, iyo saddex meelood laba meelood - keyd.
Slovenia waa godka loogu booqashada badan yahay Yurub - Postojna, qeyb ka mid ah godadkeeda waxaa loogu talagalay maxbuus dagaal oo Ruush ah.
Lipica oo leh 1580 waxay maamushaa beer harag ah, oo beerta lipitsianov - fardo naadir ah, oo la siiyay maxkamadaha boqortooyada ee Yurub.
Slovenia - waa mid ka mid ah wadamada ugu dhaqsiyaha badan ee soo koraya qaarada Yurub, waxaa jira heer aad u sareeya oo ku saabsan horumarka Aadanaha - 0.892, waana mid si joogto ah u koraya.
no deposit bonus code xoqitaanka booska